Chii Chinoita Kuti Muongorori Mukuru? | Martech Zone
Chipiri, May 5, 2009 Svondo, Kubvumbi 3, 2016 Douglas Karr
panguva eMetrics Kushambadzira Optimization Summit, takava nehurukuro inonakidza pane izvo zvinoita mukuru data muongorori. Iine imba izere nevaongorori mukamuri, iwo wakanaka mubvunzo. Kazhinji, timu yandakashanda nayo yakabvumirana kuti paive nevaongorori vebhizinesi uye vanoongorora data - uye tarisiro pane yega yega yaive yakati siyanei
Vaongorori vebhizinesi vanopa ruzivo mune fomati iyo inobvumidza sarudzo kuti dziitwe nezvinangwa zvebhizinesi mupfungwa. Vaongorori veData vanongopa iyo data. Vaviri ava vanofanirwa kunge vachitaura zvine hungwaru dhata nenzira yekuti yakanangana nevateereri uye vateereri vanokwanisa kutora mhedzisiro nekanyonganiso kadiki kanogoneka.
Paive nekubvumirana kuti simba repesvedzero yemuongorori chinhu chakakura. Chris Worland weMicrosoft isa vaongorori mumabhaketi matatu akangwara - iyo munhu anotora, ivo kuchinja, Uye anovimbika sarudzo. Tsika yesangano rako uye chimiro zvichasarudza huremu hwevaongorori vako hunokanganisa.
Andrew Janis akaibika kune vanoongorora kugona kupatsanura zvinonakidza zvichipesana nedhata. Vese vakabvumirana kuti hunhu hwevanoongorora data vanobudirira kugona kuputira mamiriro uye kutenderedza data uye kuchinjisa kune vateereri, kunzwisisa bhizinesi neindasitiri, uye kuve nyanzvi yekuona.
Pasina kupokana kuti chero hombe kambani inogona kubudirira kana kukundikana zvichibva pamano uye pesvedzero yeVanoongorora. Kune makambani asina kukura, vashandi vako vanowanzo pfeka ngowani dzakasiyana - munhu wese ane mumwe munhu anoongorora data uye achipa mhedzisiro. Kusarudza vaongorori vakuru (kana vashandi vanoongorora) kwakakosha mukubudirira kwekambani yako kana kukundikana. Sarudza nehungwaru.
Vanotengesa kunze: Iyo Nyaya Yekubudirira
Bhizinesi Vanoongorora vanofanirwawo kunge vakanaka pakuongorora mafambiro uye kuzivikanwa. A 3 - 6 mwedzi musoro-kutanga unogona kugadzira kana kutyora chigadzirwa kunyanya mupfupi hupenyu-kutenderera tekinoroji chikamu.
Great post! Isu vanhu vanogadzira tinobudirira paruzivo rwunounzwa nevanoongorora zvikuru patafura kuti vagadzire zvinhu zvekutengesa zvakanangana. Tinoda mamwe maanalyst makuru kuti aende mberi nepakati.